Galmudug oo wax kama jiraan ku tilmaantay tirakoob ay sameysay DF | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo wax kama jiraan ku tilmaantay tirakoob ay sameysay DF
Dowlada Goboledka Galmudug ayaa si kulul ugu jawaabtay Dowladda Fadaraalka, kadib markii Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ee Dowladda dhexe, uu dhawaan soo saaray shax lagu muujiyay sida beelaha Soomaaliyd u kala degan yihiin gobolka Banaadir.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle, ayaa gaashaanka u duruuray, waraaq muran badan dhalisay oo la sheegay in ay ka soo baxday xafiiska Wasiirka Qorsheynta Dowladda Fadaraalkaa, Jamaal Maxamed Xasan, taas oo si xaqiiqda ka fog loogu soo bandhigay habka ay beelaha Soomaaliyd u kala degaan Caasimadda.
Wasiir Falagle, oo ka jawaabayay, waraaqda la rumeysan yahay in laga leeyahay u jedooyin gaar ah, ayaa yiri, “Af-Somaaligu saddex xaraf kuma dhamaado, (M K T) magac saddex-daas xaraf ku dhamaada majiro, Muqdishana qorshaynta Jamal kuma dhamaato”.
Waraaqda ka soo baxday xaafiiska Wasiir Jamaal, oo loo qeybiyay hay'ado iyo ururro caalami ah, wuxaa u jedkeeda ugu weyn loo fasirtay in lagu mooro duugayo taariikhda iyo degaannada rasmiga ah ee beelo gaar ah deggen yihiin, isla-markaana lagu buunbuuninayo been hadda la dhoodhoobay oo aan beyd run ka ahayn.
Wax garadka Muqdisho, ayaa sidoo kale sheegaya in ujeedka kale ee laga leeyahay waraaqda, ay tahay isku-dirka shacabka iyo in la isku dhifto beelaha Soomaaliyeed, cuqdad iyo caloolyowna lakaa dhex dhigo bulshada caasimadda ku wada dhaqan.
Jamaal wuxuu ka mid yahay dhowr shaqsi oo Farmaajo ku xeeran kuwaas oo maleegaay qorshooyin taban oo dadka la isaga hor keenayay, waxaana si gooni ah Jamaal loogu xasuustaa xasaradihii uu billaawgii sanadkaan ka sameeyay degaanka Baran ee uu isagu ka soo jeedo.